July 30, 2019 - ThutaStar
ဖားကန့်၌ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်း၍ ကျေးရွာနေအိမ်(၂၀)လုံး မြေစာများနှင့်အတူမျောပါပျက်စီး
July 30, 2019 Thuta Star 0
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့နယ်၊ ဆိပ်မူကျေးရွာအုပ်စု၊ ကရင်ချောင်ကျေးရွာ၊ ရပ်ကွက်(၃) အတွင်းရှိ လူနေအိမ်အလုံး(၂၀)သည် ယနေ့ နံနက်ပိုင်း မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းရာမှ အထက်စဖွေ ရေမျှောချောင်းတိုက်စားမှုကြောင့် ယနေ့မွန်းတည့်(၁၂)နာရီကျော်ခန့်တွင် မြေစာများနှင့်အတူ မျောပါပျက်စီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ရေမျှောချောင်းတိုက်စားမှုကြောင့် နေအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့် အိမ်ထောင်စု(၂၀)မှ ရေဘေးသင့်ပြည်သူ အမျိုးသား(၃၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁၄)ဦး စုစုပေါင်း(၄၅)ဦးတို့အား ကရင်ချောင် ကျေးရွာ […]
ကြည့်မြင်တိုင် နတ်စင်လမ်းမှာလို့ သိရပါသည်။ ကားနောက်ကနေ လိုက်တက်ပြီး ကားပေါ်ကပစ္စည်းကို ခိုးယူဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ သူခိုးပါ။ မီးပွိုင့်လိုနေရာမျိုးမှာ ကားရပ်တဲ့အချိန် ပစ္စည်းကိုဆွဲချပြီး ခိုးဖို့ ကြိုးစားနေတုန်း နောက်က ပါလာတဲ့ ကားသမားက ဟွန်းတီးလိုက်တော့မှ အခြေအနေမကောင်းမှန်းသိလို့ လက်လျှော့သွားတာပါ။ နောက်မှပါလာသည့် ကားသမားရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် သူအတွက် မအောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့် […]
ဟင်္သာတမြို့ ကနောင်စုရပ်ကွက်တွင်စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ အမျိုးသားတစ်ဦးကဝင်ရောက်ဖျန်ဖြေသည့်အသက်(၈၀)နှစ်အဖွားအိုအားအုတ်ခဲဖြင့်ထု ၁၀တန်းကျောင်းသူအား ဓားဖြင့်ထိုးမူ့ဖြစ်ပွား…. ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဟင်္သာတမြို့ ကနောင်စုရပ်ကွက် ပဒေသာလမ်းတွင်(28-7-2019)နေ့ ညနေ ၆နာရီအချိန် ဦးစံရွှေနေအိမ်ရှေ့၌ မြဝတီရပ်ကွက်နေထိုင်သူ ဝင်းဗိုလ်သည်ဆဲဆိုနေစဉ်….. ဦးစံရွှေ၏တူဖြစ်သူ အောင်ကိုမင်းမှခြံဝသို့ထွက်လာပြီးမဆဲရန်ပြောဆိုရာစကားများရန်ဖြစ်၍ ဝင်းဗိုလ်မှလက်ထဲတွင်ကိုင်ထားသည့်သံတုတ်ဖြင်….့ ရိုက်သဖြင့်လုံးထွေးနေစဉ် မိခင်ဖြစ်သူနှင့်အဖွားဖြစ်သူဒေါ်သန်းစိန် အသက်(၈၀)နှစ်မှဝင်ဆွဲ၍ဖျန်ဖြေခဲ့ပြီး ဦးခေါင်းတွင်ဒဏ်ရာရရှိသွားသောအောင်ကိုမင်းအားတွဲ၍နေအိမ်သို့ပြန်စဉ် အဖွားဖြစ်သူကနောက်သို့လှည့်ကြည့်ရာဝင်းဗိုလ်မှအုတ်ခဲကျိုးဖြင့်ထုလိုက်သဖြင့် အဖွားဖြစ်သူဒေါ်သန်းစိန်၏ ဘယ်ဘက်မျက်ခုံးရိုးအားထိမှန်ပြီးလဲကျသွားခဲ့ပြီးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရှိခဲ့သည် […]
ပင်လယ်ကြီးမှာ ဝေဠုကျော်ကို မုန်းကြောင်း အော်နေတဲ့ သင်းသင်း
မကြာသေးမီက သင်းသင်းရဲ့ video တစ်ခုက ပရိသတ်တွေကြားမှာ ပျံ့နှံ့လာခဲ့ပြီး အားလုံးက အဲဒီ video ကို သဘောတကျနဲ့ ဝိုင်း share ထားကြလို့ နေရာတိုင်းမှာ သူ့မျက်နှာဆိုသလို facebook news feed မှာ သင်းသင်းရဲ့ မျက်နှာကြီးပဲ သုံးပို့စ်ခြားတစ်ခါလောက်ကို ကြုံတိုင်းတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ […]
သူ့ကိုယ်သူဘုရားလောင်းဟုဆိုသူ ( ရှာတွေ့ပြီ )
ရှာတွေ့ပြီ……သူ့ကိုယ်သူဘုရားလောင်းဟုဆိုသည်…….ဒီဘာသာ သာသနာစော်ကားတဲ့မိစ္ဆာအမှိုက်ကိုယ် ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သာသနာရေးဝန်ကြီးဦးအောင်ကို ဘယ်လို လုပ်မှာလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်လျှက်ပါ။ ဒီ​ကောင်​​တွေ အဓမ္မစကား​တွေ​ပြော​နေတာကို ဘယ်​သူဦး​ဆောင်​ပီးတရားစွဲမလဲ ၂၉၅ သာညိုးနဲ့ စွဲရမလား…..။crd;Aung Soe ဆရာ​တော်​ ဘုရားကြီး​တွေကို ​စော်​​စော်​ကားကား ​ပြောချင်​တိုင်း​ပြော​နေကြတာ နိုင်​ငံ​တော်​သမ္မတတွေ နိုင်​ငံ​တော်​အတိုင်​ပင်​ခံပုဂ္ဂိုလ်​​တွေ နာမည်​ခဏ ခဏထည့်​​ပြောပီး….. ဦး​ဆောင်​ပီး တရားစွဲ မည့်​လူပုဂ္ဂိုလ်​ သို့မဟုတ်​ […]
မိမိနေအိမ်တိုက်ခန်း လုံခြုံရေး ဂရုစိုက်ကြပါ။ကျနော်တို့ တိုက် ၄ လွှာမှာ သူခိုးဝင်ပြီး လူသတ်သွားပါတယ်။ မနက် ၄ နာရီမှာ နောက်ဖေးပြတင်းပေါက်က ဝင်လာပြီး ယောက်ကျား ကို ဓားနဲ့ ထိုး အသေသတ်ပြီး မိန်းမ က ခု ဒဏ်ရာတွေ နဲ့ အရေးပေါ်မှာ ကလေးလေး […]
ကဲ မန်းလေးက သွားဆျာဝန်လေးတဲ့ အကောင့်ထဲက သွားနာတဲ့ Bff တွေကို မန်းရှင်း… ဟိန်းဝေယံတဲ့တူတဲ့ မန်းတလေးက သွားဆရာဝန်လေး ဟိန်းဝေယံတဲ့တူတဲ့ မန်းတလေးက သွားဆရာဝန်လေး ဟိန်းဝေယံတဲ့တူတဲ့ မန်းတလေးက သွားဆရာဝန်လေး ဟိန်းဝေယံတဲ့တူတဲ့ မန်းတလေးက သွားဆရာဝန်လေး Unicode ကဲ မနြးလေးက သှားဆွာဝနလြေးတဲ့ အကောငြ့ထဲက […]
တနေ့က မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံကြီးကရင်ခွဲရုံမှာ သေလူတယောက်ဆီက လက်စွပ်ချွတ် မရလို့ ချွတ်ပေးဖို့ အကူအညီဖုန်းဝင်လာခဲ့ ပါတယ် …။ ကူညီပေးမယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ဘက်ကလည်း အကြောင်းပြန်ပေးလိုက်တယ် …။ ရင်ခွဲရုံရောက်သွားတော့ အေးစိမ့်နေတဲ့အခန်းထဲမှာလည်းသေလူတွေ အစီအရီနဲ့ပေါ့ …။ ကိုယ်ကတော့ ရင်ခွဲတဲ့ကျောက်ကုတင်ကြီးပေါ်က ရင်ဘတ်ဟောင်းလောင်း အေးစက်စက်နဲ့သေလူရဲ့လက်ကို ကိုင်တွယ်လို့ အထိအခိုက်မရှိအသပ်ရပ်ဆုံးချွတ်ပေးခဲ့ရတာပေါ့ …။ အဲ့လိုနဲ့ […]
အဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒတခုဖြစ်တဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရားကို ဖူးမြော်ခွင့်ရရှိသွားလို့ ပီတိဖြစ်နေတဲ့ ကိုအောင်ငွေ
ကိုအောင်ငွေကတော့ တွံတေးသိန်းတန်ရဲ့ သီချင်းတွေကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သီဆိုနိုင်တာကြောင့် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ချောင်းဦးမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ကိုအောင်ငွေဟာဝမ်းရေးအတွက် ရေခပ်ရောင်းတဲ့ အလုပ်ကို ရိုးသားကြိုးစားစွာ လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပြီး ရေခပ်ရင်းအပျင်းပြေအနေနဲ့ သီချင်းတွေကို သီဆိုလေ့ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုအောင်ငွေက အသက် (၁၈)နှစ်လောက်မှာ ချစ်သူနဲ့ ကွဲခဲ့တာကြောင့်အသည်းကွဲပြီး တွံတေးသိန်းတန်ရဲ့ အလွမ်းသီချင်းလေးတွေကို စတင်သီဆိုဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်သလို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ […]
ဦးပိန်တံတားတွင် တိုင်ကိုမှီကာဓါတ်ပုံရိုက်စဉ် ပြုတ်ကျပြီး ရေနစ် သေဆုံး မန္တလေး ၃၀ ဇူလိုင်…. ဦးပိန်တံတားတွင် အမျိုးသားတစ်ဦး တိုင်ကိုမှီကာဓါတ်ပုံရိုက်စဉ် ပြုတ်ကျပြီး ရေနစ်သေဆုံး မန္တလေးမြို့ တောင်သမန်အင်း ဦးပိန်တံတားပေါ်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦး တံတားတိုင်ကိုမှီကာ ဓါတ်ပုံရိုက်စဉ် ပြုတ်ကျပြီး ရေနစ်သေဆုံးမှု ယနေ့မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း […]